Monument Valley2– လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
ယခု အသစ်စက်စက် အခန်းအသစ် အပါအဝင်, ပျောက်ဆုံးသောသစ်တော:
The Lost Forest သည် သစ်ပင်များကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်တီးထားသော အထူးအခန်းဖြစ်သည်။, Planet's Green Game Jam အတွက် ကစားခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်.
ဒီမြင်ကွင်းလေးမျိုးနဲ့ပေါ့။, Play4Forests အသနားခံစာမှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး သစ်တောထိန်းသိမ်းခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျှဝေခံစားမှုကို ကြေညာဖို့ သင့်အား လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။.
အပ်ဒိတ်အသစ်ကို သင်နှစ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်တောများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန် မျှော်လင့်ပါသည်။!
မှော်ဆန်သောဗိသုကာပညာဖြင့် ခရီးစတင်စဉ် မိခင်နှင့်သူ၏ကလေးကို လမ်းပြပါ။, မြင့်မြတ်သော ဂျီသြမေတြီ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို သင်လေ့လာသည့်အခါ စိတ်ကူးယဉ်လမ်းကြောင်းများနှင့် ကြည်နူးဖွယ်ပဟေဋ္ဌိများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း.
ဆုရ Monument Valley ၏ နောက်ဆက်တွဲ, Monument Valley2လှပပြီး မဖြစ်နိုင်သော ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် စွန့်စားမှုအသစ်စက်စက်ကို တင်ဆက်သည်။.
ချိုင့်ဝှမ်းနက်နဲသောအရာများအကြောင်း သူ့ကလေးကို သင်ပေးရင်း Ro ကိုကူညီပါ။, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပတ်ဝန်းကျင်များကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး ၎င်းတို့ကို လမ်းပြရန် ဗိသုကာပညာကို အသုံးချပါ။.
“အရင်ကထက် ပိုဆန်းသစ်တယ်” – ကြိုးတပ်ထားသည်။
"ငါ့ကို ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ခြေအိတ်တွေကို ချွတ်ထားတဲ့ surreal world ရဲ့ မွမ်းမံမှုလေးတွေ" – ပိုလီဂွန်
“မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆို ရနိုင်သော အကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွေ့အကြုံများထဲမှတစ်ခု, မိုဘိုင်းဖုန်း မပြောနဲ့" – POCKETGAMER
“မြင်တွေ့ကြားသိရတိုင်း ကြည်နူးမိပါတယ်” – DESTRUCTOID
Monument Valley စကြာဝဠာမှ လုံးဝအသစ်သော ဇာတ်လမ်း. Monument Valley ကိုခံစားရန် ယခင်က Monument Valley ကို ကစားရန် မလိုအပ်ပါ။ 2.
ထင်ယောင်ထင်မှားတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လှပတဲ့ အဆင့်တွေကို ခံစားလိုက်ပါ။, တရားထိုင်ခြင်း ပဟေဠိများ, ဇာတ်ကောင်များကြားတွင် ပြောင်းလဲနေသော ဒိုင်းနမစ်များကို ရှာဖွေရန် အသစ်စက်စက် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို အသုံးပြုခြင်း။.
ဗိသုကာလက်ရာပုံစံများ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသော အနုပညာလက်ရာ, အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွှမ်းမိုးမှုများ, တစ်ခုချင်းစီကို အံ့မခန်း ဂျီဩမေတြီ အဆောက်အဦများအဖြစ် ဘာသာပြန်ပါသည်။.
ထူးထူးခြားခြား မြူးထူးသည့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော အသံမြင်ကွင်းများတွင် သင့်ကိုယ်သင် နှစ်မြှုပ်လိုက်ပါ။, Ro နှင့် သူ့ကလေး၏ ခြေလှမ်းတိုင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံစွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားသည်။.
Monument Valley2Android အသုံးပြုသည့် စက်များနှင့်သာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 4.4 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း.
← Squid စိန်ခေါ်မှုဂိမ်း! – လှိုင်သာယာ&Hack Stick Challenge ဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack →
Te Reo Māori/mi/monument-valley-2-cheatshack/
gagana fa'a Samoa/sm/monument-valley-2-cheatshack/